AOCE-SICEM 2020 (The 17th Asia-Oceania Congress of Endocrinology and the 8th Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism)
Guideline for Fever Clinic (20-4-2020)
COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထ်ိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် လူ (၅) ဦးဖြစ်စေ၊ လူ (၅) ဦးထက်ပို၍ဖြစ်စေ စုဝေးခြင်း မပြုရ
မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းမှ ၀န်ထမ်းများအား ဆန်နှင့်ဆီများ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည် (၉.၄.၂၀၂၀)
Seminar on Prevention & Treatment of COVID-19: Experiences from China
PPE FOR HEALTH BY OCCUPATION HEALTH SOCIETY
Suggestion to General Practitioners to COVID 19 Pandemic
COVID-19 ဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက်များ (မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ)
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က COVID-19 အခြေအနေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူလူထုသို့ အစီရင်ခံတင်ပြသည့် မိန့်ခွန်း
Instructions for Home Quarantine (Suspected person) (7-2-2020)
Instructions for Home Quarantine (Family) (7-2-2020)
Advice to all Regional Associations and Speciality Societies on COVID-19
“ECG” Training Course သင်တန်းကို 15.3.2020 တွင်ဖွင့်လှစ်ပါမည်
“Shortcut to Basic Biostatistics using SPSS” Training Worshop course ကို ဧပြီလ ဖွင့်မည့်
ECG for Daily practice
CPR Training Course (16 February 2020)
မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း (ဗဟို) နှစ်ပတ်လည်ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေး ဓာတ်ပုံ
မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း (ဗဟို) ၂၀၁၉ ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး ဓာတ်ပုံ
မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း(ဗဟို) ဥက္ကဋ္ဌ မှ တည်ခင်းဧည့်ခံကျွေးမွေးသည့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်
SAARC Medical Association Meeting 28th December, 2019, Kolkata
MMA Election Commission (2019-2021)
သက်ကြီးဆရာဝန်များထောက်ကူအဖွဲ့ (SGED) နှစ် (၂၀) ပြည့်အခမ်းအနားနှင့် အလှူငွေပေးအပ်ခြင်း မှတ်တမ်းပုံ
စာပေဆုရစာရေးဆရာ ဆရာဝန်များဂုဏ်ပြုပွဲနှင့် ကျန်းမာရေးအသိပညာမြှင့်တင်ရေးဆွေးနွေးပွဲ
(၃၇) ကြိမ်မြောက် သက်ကြီးဆရာဝန်ကြီး၊ ဆရာဝန်မကြီးများအား ပူဇော်ကန်တော့ပွဲ
The 6th International Gastoenterology and Hepatology Conference (8 – 9, February 2020)
Panel Discussion, Sharing Experience on Chikungunya (23.08.2019)
8th EMSS-MAYO Course in Advanced Endocrinology (01-04 Dec 2020, Singapore)
22nd Asia-Pacific League of Associations for Rheumatology Congress 31 August –3September 2020 )
Ph : (+95 1) 378 863 Fax :(+95 1)378 863
© 2016-2020. Myanmar Medical Association (MMA). All rights reserved. Web Design by NetScriper